3 B2B Maitiro Ekutengesa Anotarisirwa Newe Rongedzero Yako Nhasi Martech Zone
Kutengesa, seindasitiri, kuri kukurumidza kuchinja. Vatengesi zvikwata vagara vachikwanisa kuita kuwedzera kwekuwedzera kwemaitiro mukuita kwavo, asi mumakore mashoma apfuura, kutengesa kwakapinda munguva nyowani inokurudzirwa nehunyanzvi, kuongororwa uye neshanduko inoshamisa mukuita kwevatengi. Vatengesi vekutengesa vaisa tarisiro nyowani pakushandisa tekinoroji kuyera kutengesa rep chiitiko uye kugadzirisa mashandiro kuburikidza nehuwandu hwekuongorora uye kuyedza nematekisheni uye zano.
Kana iwe uchifananidza timu yemazuva ano yekutengesa kune imwe yeanopera makore makumi mapfumbamwe, mutsauko husiku nemasikati. Icho chiito chekupura nzira uye kutonhora-kudaidza chero munhu uye wese kuti atyise kumusoro anotungamira afa. Asi…. haasi mapoka ese ari kutora zviyero zvitsva zvekutengesa. Mamwe masangano ekutengesa ari kumashure kumashure kwevakwikwidzi uye ari kunetseka kuenderana nenguva. Ndicho chikonzero iyo DocSend timu yakaisa pamwechete izvi infographic inotsanangura mashandisiro anoita iyo yekutengesa pasi uye zvikwata zvipi. Heano makuru matora.
Chii Chakaipa Netsika Nzira Yekuita Kutengesa?
Zvakawanda! Kana zvikwata zvichishandisa vatengesi vega vane chekuita nekutungamira kwavo uye nekuvhara madhiri avo, zvinogona kudzora kugona kwechikwata chevatengesi kukwirisa nekugadzira nyaya dzakakomba:
Sei Vatengi veB2B Vachinja Maitiro Ekutengesa?
B2B software vatengi vacho ikozvino vanokwanisa kuwana risingaperi huwandu hweruzivo nezve zvingangogadzirwa uye vatengesi. Vatengi vazhinji vanoita kutsvagurudza kwakakura vasati vatombozadza fomu rinotungamira kana kubata mutengesi. Nzira yekare yekutengesa yakamisikidzwa sevachengeti vemagedhi eruzivo rwechigadzirwa: ivo vaigona kukuudza iwe pamusoro pechipo uye nekukutora pamutengo, uye nekuti ruzivo rwacho rwakanga rusingawanikwe pachena Iyi haisisiri nyaya yacho; izvozvi nyanzvi dzekutengesa dzakapihwa basa rekutsvaga mabhizinesi ekurwadziwa uye kurerutsa marwadzo neicho chigadzirwa. Basa ravo kugadzira kuwirirana pakati pevose vane chekuita nesangano uku vachikunda zvinopesana uye kudzikisira zvikumbiro zvakakosha zvekugadzirisa izvo zvinowedzera kuomarara. In Iyo Inotengesa Kutengesa kubva kuECB, maitiro mana anoonekwa seanogona kuvharira ezvino kutengesa rep:
Timu Yekutengesa Inogona Sei Kuchinjika kune Iyo Nguva?
Kana iwe parizvino uchitarisira timu yekutengesa iri kumashure zvishoma kwenguva, pane matatu matatu maitiro aunogona kutora pamoyo izvo zvinoita kuti iwe nechikwata chako mukurumidze:
Gadzira tsika yekushandira pamwe
Vaka Chigadzirwa Chemazuva Ano Chekutengesa
Chitoro chinotengesa chinogona kutsanangurwa kungoita tekinoroji uye software inoshandiswa neboka revatengesi kubatsira maitiro ayo ekutengesa Nekuvaka yakajairwa seti yesoftware iyo inokwanisa kubata uye kugadzirisa kutsvagisa kwekutengesa, mharidzo, uye kuvhara, unogona kugadzira rakasarudzika mafambiro ebasa reboka rako rekutengesa iro rakajairwa zvinoenderana nhanho dzese dzekutengesa kwako kutenderera. Nekugadzirwa kwegore-based software, vatungamiriri vekutengesa havafanirwe kushanda neIT kuburitsa matsva kutenga software kune yavo timu. Izvi zvinovatendera kuti vakurumidze kuwedzera, kubvisa uye kutsiva
Nekugadzirwa kwegore-based software, vatungamiriri vekutengesa havafanirwe kushanda neIT kuburitsa matsva kutenga software kune yavo timu. Izvi zvinovatendera kuti vakurumidze kuwedzera, kubvisa uye kutsiva software mudura ravo kuti vakwanise kuyedza uye vawane yakakwana setup yeboka ravo.
Mubhuku rake rechimurenga, Inotarisirwa Mari, Aaron Ross inotsanangura kuti nei kutsvaga kwekutengesa kuchitungamira uye kuvhara madhiri kunofanirwa kuitwa nemaviri akasiyana mabasa pachikwata chako. Kufungidzira inotungamira kana inopinda inotungamira inowira mumakumbo eMumiriri weKutengesa Kwekuvandudza, kana SDR. Pane flipside Akaunti Vatungamiriri, iro basa rinotungamira kune yakawanda yekutaurirana, chibvumirano kutaurirana, uye kuvhara kunotora rakasiyana hunyanzvi hwakaiswa. Nekusarudzika mabasa, mumwe nemumwe anobatsira pane rako rekutengesa timu uye tarisa pakuvaka yakawedzera yakatetepa uye yakanatswa hunyanzvi hwakaiswa.
Pane flipside Akaunti Vatungamiriri, iro basa rinotungamira kune yakawanda yekutaurirana, chibvumirano kutaurirana, uye kuvhara kunotora rakasiyana hunyanzvi hwakaiswa. Nekusarudzika mabasa, mumwe nemumwe anobatsira pane rako rekutengesa timu uye tarisa pakuvaka yakawedzera yakatetepa uye yakanatswa hunyanzvi hwakaiswa.
Tsigira Vatengesi Vako!
Zvakajairika mumasangano ekutengesa echinyakare emhumhi ega anotonga pasi. Vatengesi ava vanowanzoda kushoma kana kudyidzana kana kubatana nevamwe veboka. Vanowanzo bvunza kuti vave ndasara ndega saka vanogona rova nhamba yavo - uye kana varova nhamba yavo yemwedzi vanorongedza zvinhu zvavo voenda kumba. Mune mhando iyi yekumisikidza, vatengesi havana kutsigirwa (uye vanowanzo kusada kana ichipihwa).
Iyi haisiriyo iyi zvakare, zvikwata zvemazuva ano zvekutengesa zvinotsigirwa nekutengesa mashandiro, vaongorori, vagadziri, kugoneswa kwekutengesa, uye zvikwata zvakawanda zvinoda kuenderera mberi nekudzidziswa. Iyi inotsigira vatambi inopa vatengesi vamwe maturusi avanoda kuti vabudirire vachivarega vachitarisa pakutengesa. A kudzidza kubva kuMcKinsey akawana kuti zvikwata zvekutengesa zvakawana iyo yepamusoro ROI apo ingangoita 50-60% yetimu iri mumabasa akatsaurirwa kutsigira vatengesi chaivo
Mazuva ano zvikwata zvekutengesa zviri kuisa mari muhunyanzvi, kuyedza nematekiniki uye maitiro, kushanda pamwechete zvisati zvamboitika uye kugonesa mumabasa anoda tarisiro nhete pavanenge vachivandudza hunyanzvi. Nguva nyowani yekutengesa yatanga, uye kana timu yako ichiregeredza maitiro aya - anogona kuzopera.
Tags: aaron rossaccount vatungamiririb2b yekutengesa stackBSNCRMdhiri manejimendiDemoemail trackingMatthew Dixonsimba dhayairamari inofungidzirwamupiroKufungidzirazvekutengesa zvemukatisoftware yekutengesakutengesa stackrutsigiro rwekutengesatekinoroji yekutengesakutengesa munharaundamutengesi wekutengesa
John-Henry ndiye Growth Kushambadzira Manager we DocSend. Iye ari B2B SaaS mushambadzi anonyanya kutsvaga injini yekugadzirisa, kukwikwidza njere, WordPress, analytics, zvemukati, inotungamira chizvarwa uye shanduko.